Amaphephadonga amahle kakhulu olwandle e-Mac | Ngivela ku-mac
Amaphephadonga amahle kakhulu olwandle e-Mac
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sethule i entry nge Izizinda ezingama-50 ezihamba phambili zama-Mac. Phakathi kwawo bekukhona amabhishi, kodwa ngisale nginesifiso sokugqoka kakhulu futhi ikakhulukazi manje namakhaza akwenzayo. Akukhona ukuthi angiwathandi amakhaza, kahle kahle angiwathandi. Engikuthandayo iqhwa kanye nemvelo yasekwindla. Nokho-ke kuyenzeka kimina ukuthi uma sikule sizini yonyaka, ngikhumbula kakhulu olwandle, ulwandle, isihlabathi kanye nezinsuku ezinde. Kodwa uma ngisehlobo ngikhumbula izintaba, amakhaza nobusuku lapho ulala kahle. Noma kungaba njalo, ngizokushiyela amaphephadonga ambalwa nge beach indaba ephathwayo ukuze ukwazi ukuyocabanga ngendawo oya kuyo ehlobo elizayo.
1 Ama-hammocks ogwini
2 Ukushona kwelanga ngasolwandle
4 Ulwandle njengosilika
5 Egqamisa isihlabathi
6 Asibuyele epharadesi
7 Isizinda sokuzola
8 Izindawo ezifihliwe zamabhishi
9 Ubusuku phambi kolwandle
10 Amanye amaphephadonga wasolwandle we-Mac yakho
Ake siqale ngamandla. Sizophupha ngolwandle oluyipharadesi lapho sibona khona kuphela ulwandle olunamanzi acwebile, izihlahla zesundu ezibekwe endaweni efanele okulenga kuzo inqwaba yama-hammocks. Eyodwa yakho kanye nenye ... eyanoma ubani omkhethayo. Ulala phezu kwabo futhi ngiqinisekile ukuthi cishe noma iyiphi inkinga kufanele ihambe yodwa. Angazi noma wake wakwenza yini lokho, kodwa lowo muzwa wokuzola, nokulalela ukuvungama kolwandle kuphela, uyigugu. Ikhandidethi elihle lendawo ehlobo lika-2022.
Ukushona kwelanga ngasolwandle
Kulungile, lesi sithombe ngokuqinisekile sizobekwa ukunikeza umona omkhulu. Kodwa ilokho okuyikho, ukukhetha izithombe othi uma uzibona zikuyise kwenye indawo futhi uzizwe sengathi ukhona ngempela. Ukuthi uma uvula i-Mac bese ubona lesi sangemuva, ungangeni awufuni lutho ngaphandle kokujabulela okwenzayo. Iphupho, umgomo kungaba ukucambalala kuleso sihlabathi ekushoneni kwelanga ubukele ulwandle. Kubukeka njenge-cove engenamuntu ofinyelele kuyo ngokugwedla. Jabulela, ngoba ukushona kwelanga kuvame ukuhlala isikhathi esifushane, into enhle ukuthi ukuphuma kwelanga kuza kamuva.
Uma okuthandayo kakhulu mayelana nolwandle ulwandle, lesi sithombe sisebenza kahle kakhulu. imele izinto ezibalulekile zolwandle. Amanzi acwebile acwebile lapho ongageza khona uma kushisa. Angazi ngawe, kodwa mina, ngokujwayelekile uma ngigeza angithandi ukuduka kakhulu nogu. Izilwandle eziphakeme zingihlonipha kakhulu. Ngincamela ukuhamba ngesikebhe ngaphambili. Yebo namanzi njengakulesi sithombe, ezolile.
Lesi sangemuva singesinye sezintandokazi zami. Ngiyakuthanda ukuthwebula izithombe futhi esinye sezithombe engithanda ukuzenza kakhulu esokuchayeka isikhathi eside. Okungukuthi, shiya i-shutter ivuliwe isikhathi eside futhi ngaleyo ndlela ukunyakaza kuba sobala kakhulu. Uma ukwenza emanzini, kuba sengathi ubuka usilika. Uma wenzela esibhakabhakeni, amafu anda, abukeke sengathi ayanwebeka. Uma uhlanganisa izinto zombili, kukhona okumangalisayo okusele. Uma ungeza ukushona kwelanga, unalokhu iphepha lokunamathisela odongeni.
Uma ngemuva konke kubonakala kuzolile futhi kubushelelezi esikhathini esidlule, ngemuva kuphambene. Bengifuna ukuzihlanganisa ukuze ngibone umehluko phakathi kokunye nokunye. Ngakho-ke ungabona ukuthi ngokumane uguqule imingcele yekhamera ungakwazi ukuvala ukuthamba noma ubulukhuni. Ngokumelene nalesi sizinda, ufuna ukugqamisa ilanga nombala osawolintshi wesibhakabhaka ekushoneni kwelanga. Kodwa inhlabathi namadwala kubukeka sengathi kuvela kuMars. I-landscape engaphandle komhlaba, kodwa leyo edonsa ukunakwa ngamandla. Kuhle kakhulu kuMac.
Ngemva kokubona indawo ecishe ibe yomile nakuba siphinde silubone ulwandle, ngibeke enye ezokubuyisela emuva. Indawo lapho sonke sifuna ukuba khona manje, cishe nakanjani. Lowo mbala wamanzi, leso sihlabathi esihle kanye nalezo zihlahla zesundu ezibonisa izindawo ezinomthunzi, uphelele ukuze ukwazi ukuchitha amahora ungenzi lutho. Yilokho lesi sithombe esikusho kimi. Iphakamisa isikhathi samahhala, ukuphumula, akukho ingcindezi evela emsebenzini noma i-COVID. Kubonakala sengathi sisemhlabeni ofanayo lapho zingekho khona izinkinga. Kuyinto edingekayo ngezinye izikhathi.
Angazi noma lesi sithombe kufanele sisetshenziswe njengesithombe sangemuva se-Mac noma sibekwe etafuleni eliseceleni kombhede ekamelweni lami lokulala. Liyayibona futhi lizizwa lizolile nhlangothi zonke. Ngingase ngibeke phezu kwe-nightstand kodwa futhi phezu kwetafula ehhovisi lami. Ngakho uma into ethile yangaphandle noma yangaphakathi ingibangela ukucindezeleka noma ukwethuka, ngokuqinisekile ngibheka lesi sithombe esinalawo manzi asobala, azongiphumuza.
Uma kwenzeka lokhu okwedlule kungabonakali kukuhle ngokwanele kuwe ukuthi ukhululeke, ngikushiyela lokhu ngezansi. Omunye umbono ofanayo. Amanzi acwebile futhi azolile, isihlabathi esincane. Kodwa ngaphezu kwakho konke, amafu amhlophe ekugcineni. Bangabalingiswa. Amafu anjengokotini. Ukuthamba, ukuzola nokuphumula. Isithombe ozozama ukusibona ukuthi sibukeka kanjani ku-Mac. Sengivele ngikutshela kusengaphambili, lokho kubukeka kukuhle kakhulu.
Izindawo ezifihliwe zamabhishi
Ngiphinde ngahlola lesi sangemuva ku-Mac. Empeleni ngikuhlole konke ngaphambi kokukubeka lapha. Sengizamile okuningi kodwa ngizilahlile ngoba bekungangeni kahle, noma bemboze imifanekiso noma kwezinye izindawo esibukweni baphanjaniswe namafayela. Noma kunjalo, lena engikulethela yona manje, ngingakutshela ukuthi ingenye ehamba phambili. Inakho konke okusikhumbuza ukuthi amabhishi akukona nje ukuphumula nokuzola. Siphinde sibe nezinketho zokuzidela. Ngoba thola izindawo ezifihliwe abambalwa abazaziyo, nakuba kamuva ziba zinkulu, kodwa kuyinto engokwemvelo ezinhlotsheni zethu. Ilanga, imigede, amanzi nesihlabathi ... Yini ezosilindela ngaphakathi?
Ubusuku phambi kolwandle
Kwezinye izindawo ezisogwini singathola izindawo ezinjengalezi. Ibhishi, ukushona kwelanga okuphuphile kanye nendawo yokudlela enhle. Uma phezu kwalokho indawo iphakathi kwamanzi, ngokubukwa okumangalisayo ngoba phezulu ube nosuku olujwayelekile lwamafu kodwa alumboziwe ngokuphelele, ngokuqinisekile akukho okungahamba kahle. Kufanele nje ujabulele imibono, ukudla futhi ikakhulukazi inkampani.
Amanye amaphephadonga wasolwandle we-Mac yakho
Nawa amanye amaphephadonga anetimu efanayo. Ulwandle futhi ziyini ukwehluka kwalokhu okungenhla. Ngethemba ukuthi phakathi kwabo bonke kukhona omthandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Amaphephadonga amahle kakhulu olwandle e-Mac
Funda konke okuhlobene nezinga lokuvuselela lamadivayisi akho e-Apple
Ungawususa kanjani umsindo kuvidiyo ku-Mac